အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်ကလေးများမွေးစားကြသူ 10 ဦးကြယ်များ
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွတက်ကြွစွာပြည်ပမှာကလေးများချမှတ်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အာဖရိက, အာရှနှင့်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများ၏မိဘမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်နာမည်ကြီးတွေဆင်းရဲမွဲတေမှုချောက်ကမ်းပါးပေါ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာတွေ့သူကံဆိုးလေးတွေကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေ ...
စုဆောင်းခြင်းအခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်မိဘမဲ့များအတွက်၎င်းတို့၏မိသားစုများခေါ်ဆောင်သွားသူ 10 ဦးနာမည်ကြီးတွေတွေ့ရမယ်။
Angelina Jolie နဲ့ Brad Pitt
တောင်မှသူမရဲ့ဒုတိယခင်ပွန်း Billy Bob Thornton နှင့်အတူလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတှငျးအိန်ဂျလီနာဂျိုလီ Maddox ၏နာမကိုပေးတျောမူသောသူကမ္ဘောဒီးယားကနေတစ်ဦး 7-လအရွယ်ယောက်ျားလေးမွေးစားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း, Brad Pitt နဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဂျိုလီဗီယက်နမ်မှကုရှပြည်နှင့် Pax ကနေသူ့မိသားစုသို့အနည်းငယ် Zahara ချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ သမီးတစ်ဦးရှိလောမြို့၌ Nouvel နှင့်အမွှာ Knox နှင့် Vivienne: ထို့အပြင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသုံးဇီဝကလေးများရှိခဲ့ပါတယ်။ မိဘများ၏ခွဲခြာပြီးနောက်ကလေးများအားလုံး Angelina နှင့်အတူထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
ယခုသူမလည်းသူတို့ကိုခြောက်: မက်ဒေါနားသည်မကြာသေးမီကကလေးအရေအတွက်အပေါ်အိန်ဂျလီနာဂျိုလီနှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအား။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ခုနှစ်တွင်မာလာဝီကနေနှစ်ခု4နှစ်အရွယ်အမြွှာညီအစ်မများကမွေးစားသည့်ပေါ့ပ် diva - တက်ကြွစွာကြယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရန်ပုံငွေကူညီပေးသည်ဖြစ်သောဆင်းရဲသောအာဖရိကပြည်နယ်, ။ ကလေးမိခင်ကသူတို့ရဲ့ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်တစ်ပါတ်သေနှင့်ဖခင်သည်သူ၏အလုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတစ်ဦးအမိုးအကာမှအမြိုးသားအကိုပေး၏။ ဤတွင် Stella ဧသတာကိုခေါ်သူကိုမိန်းကလေးများနှင့်မက်ဒေါနားကိုမြင်လျှင်ပရဟိတရေးရာအပေါ်မာလာဝီသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
အစောပိုင်းကအဆိုတော်ပြီးသားယခု 12 နဲ့ 11 နှစ်နေသော, ဤဒါဝိဒ်အမည်ရှိတိုင်းပြည်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ကရုဏာမိန်းကလေးအတွက်မွေးစားခဲ့သည်။ မက်ဒေါနားကိုလက်ခံရရှိအပြင်နှစ်ခုဇီဝကလေးများနှင့်အသက် 21 နှစ်အရွယ် Lourdes ရှိပါတယ်, နှင့် 17 နှစ်အရွယ် Rocco ။
နှစ်ခုအသံဖမ်းခြင်းနှင့်ဇီဝတဦးတည်း: မင်းသမီးကက်သရင်း Heigl နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း Josh ကယ်လီအဆိုတော်ကလေးသုံးယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သမီးကြီး, နန်စီ Lee ကတောင်ကိုရီးယားမှာ 2009 ခုနှစ်ကအတည်ပြုခဲ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါမိန်းကလေးတစ်ဦးမွေးရာပါနှလုံးရောဂါရှိခဲ့တယ်, သင်သည်မွေးစားမိဘများရမီ, သူမတစ်ဦးလေးနက်ခွဲစိတ်ကုသမှုခဲ့ရသည်။
သူမ၏ကိုယ်ပိုင်မိသားစုမှဆက်စပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားကလေးတစ်ဦးမွေးစားရန် Heigl သတိပေးခံရသောအကြောင်းပြချက်များ။ အမှန်မှာမင်းသမီးအစ်မ-ကိုးရီးယား, မိဘများပင်ကက်သရင်း၏မှေးဖှားမီမွေးစားသောကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
"ငါကိုရီးယားကနေမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုယူမည်ဟုငါသိ၏, ငါ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုအတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိချင်တယ်။ ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မ "ဇီဝကလေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောပေမယ့်ပထမဦးဆုံးငါ့အအိပ်မက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်ဆုံးဖြတ်
သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်နန်စီ Lee ကသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုထင်ရှားပြီးနောက်, စုံတွဲ Adelaide အမည်ရှိသောသူဝီဇီယားနားကနေကလေးကမိန်းကလေးမွေးစားများနှင့်4နှစ်အကြာတွင်သူတို့ပထမဦးဆုံးဇီဝဗေဒကလေးသည်မွေးဖွားကြပါပြီ - သားယောရှုကဆရာတော်။
အဆိုပါသရုပ်ဆောင်, သူတို့ကိုနှစ်ခုသမီးလေးယောက်မွေးစားခဲ့သည်။ 2006 ခုနှစ်နွေဦးမှာတော့ Ewan နှင့်သူ၏ဇနီး Dzhamiyan အမည်ရှိမွန်ဂိုလီးယားကနေ5နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးမွေးစားခဲ့သည်။
2006 ခုနှစ်တွင် Meg Ryan တရုတ်ထံမှတစ်ဦးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကမွေးစား။
"ငါသည်ရုံသူမ၏မျက်နှာငါတို့သည်မြင်လျက်နှင့်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါတနေ့ငါကလုပ်လိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ ကလေးမွေးစားခြင်း - ကိုယ်ဝန်ထက်မလျော့နည်းတာဝန်ရှိအရေးယူ "
native သားရိုင်ယန်ကအရမ်းပျော်ရွှင်နည်းနည်းအစ်မကြီးနှင့်ပင်သူကအမည်တစ်ခုရွေးယူကြ၏ - Daisy စစ်မှန်သော။
မီယာ Farrow - မွေးစားသားသမီးတို့အဘို့တစ်ဟောလိဝုဒ်စံချိန်: သူမမွေးစားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတဆင့်ထက်ပိုမို 11 ကြိမ်သွားလေ၏! သူမ၏ကျောင်းသားများထဲတွင်ကိုရီးယား, ဗီယက်နမ်, အာဖရိကနှင့်အိန္ဒိယထံမှကလေးများရှိပါတယ်။
မင်းသမီး Emma Thompson က
အများစုမှာမွေးစားမိဘများကအလွန်နုပျိုကလေးများချမှတ်ရန်ပိုနှစ်သက်ပေမယ့်မင်းသမီးချော Emma Thompson တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့သူ၏မိသားစုအတွက် Tindiebua Aqaba အမည်ရှိအသက် 16 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုယူ။ မိမိအတစ်ခုလုံးကိုမိသားစု 1994 လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုစဉ်အတွင်းသေဆုံးခဲ့သည်ပြီးနောက်ရဝမ်ဒါကနေလုလင်တစ်ဦးမိဘမဲ့ထားခဲ့တယ်။
မာရိသညျ-Louise က Parker
မာရိသညျ-Louise က Parker 2004 ခုနှစ်တွင်မိခင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, သားဝီလျံဘွားမြင်လေ၏။ အဆိုပါမင်းသမီးတစ်ဦးကလေးကန့်သတ်ခံရဖို့မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, 2007 မှာ, ကယ်ရိုလိုင်း Aberesh အမည်ရှိသီယိုးပီးယားကနေမိန်းကလေးတစ်ဦးမွေးစား။
ဟယ်လင် Rolls, တီဗီစီးရီး၏ကြယ်ပွင့် "အယ်လင်နှင့်ယောက်ျားလေးများ" လက်ထပ်ဖူးခြင်းနှင့်ကိုယ်သားသမီးမရှိပါ။ 2013 ခုနှစ်တွင်သူမသီယိုးပီးယားကနေအစ်ကိုနဲ့အစ်မချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ သို့သော်မင်းသမီးမည်သူမဆိုမိမိအပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝမှမွှုပျနှံလိုပါဘူး, နှင့်သူမ၏ကလေးများသာသူတို့ထဲကတစ်ဦးသည်ယခုအခါအသက် 10 နှစ်အရွယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏, နှင့်အခြားသော -6။
အရောင်မျက်စိနှင့် 10 နာမည်ကြီးတွေ
ထို့နောက်ယခုအကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်များကို: စီးရီး "အယ်လင်နှင့်ယောက်ျားလေးများ '' 25 နှစ်
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်အဆင့်အတန်းနှင့်ခရီးသွားအပေါ်တံတွေးထွေးလိုသူ 25 ဦးကြယ်ပွ!
သငျသညျ Meghan Markle အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါ 15 အမှုအရာ - သစ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့မင်းသားဟယ်ရီ
ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင့် unceremoniously ဓာတ်ပုံကိုသာမန်လူတွေလုယူဖျက်ဆီးခြင်းကို 15 ကြယ်များ
ဇိမ်ခံ Ivanka Trump ၏ဘဝအကြောင်းကို 13 ဖြစ်ရပ်မှန်များ
Wow,5သို့မဟုတ်အရှိဆုံးရူးနှင့်သာမန်ထက်ကြယ်ပွင့်ကငျြ့!
အရင်ထွက်ရှာပါ: အဓိကခြားနားချက်များမင်္ဂလာဆောင် Meghan Markle နှင့်ကိတ် Middleton
Fungicide "strobing" - အသုံးပြုမှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း - ဘာလုပ်သနည်း
အီဗာ Mende - ဓာတ်ပုံလုပျသငျ
Beyonce နှင့်သူမ၏သမီးဂျနီဖာလိုပက်ဇ်, ဘတ်စကက်ဘောဒီဂိမ်းမှာ Karlie Kloss နှင့်အခြားစူပါစတား
သောကြာနေ့ 13 ရက်နေ့ကခန့်မှန်း
တဦးတည်းသူနာပြုမိခင် marshmallows နိုင်သလား?
Gypsum panel ကို 3D - မြို့ရိုးကိုပုံစံမျိုး